Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. अनलाइन कक्षा कति सार्थक ? (भिडियोसहित) – Emountain TV
काठमाडौं, १० जेठ । कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेको वेलामा विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुले अनलाइन र भर्चुअल विधिवाट विद्यार्थिहरुलाइ पढाउन सुरु गरेका छन् ।
लकडाउनपछि शैक्षिक कार्यक्रम कहिलेदेखि शुरु गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अलमल छ । सरकारले कुनै ठोस तालिका सार्वजनिक गर्न नसकेपनि अनलाइन कक्षा शुरु हुन थालेको छ । इन्टरनेटको पहुँच भएका स्थानमा अनलाइन कक्षा शुरु भएको छ ।
गएको चैत्र ५ भित्र वार्षिक परिक्षा सकिएपछि विद्यालय तहका विद्यार्थी यतिबेला घरमै छन् । लामो समय भैसक्दा पनि सरकारले शैक्षिक कार्यतालिका टुंगो लगाउन सकेको छैन । सरकारी अनिर्णयका कारण विद्यालय शिक्षा के हुने भन्ने अन्यौल छ । यद्यपी राजधानीका केही संस्थागत विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा शुरु गरेका छन् ।
राजधानीमा सामुदायीक तथा संस्थागत विद्यालय सयौ छन् । इन्टरनेट पहुँचका हिसाबले यी विद्यालयहरु सक्षम छन् । इन्टरनेटको पहँुच पनि भएकोले अनलाइन कक्षा संचालन गर्न संभव भएको हो । लामो समयदेखि विद्यालय कक्षाा बन्द भएपछि बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य अन्यौल छ । यद्यपी अनलाईनमाध्यमबाट भएपनि केही विद्यालयहरुले पठन पाठन शुरु गरेका छन् । अनलाइनबाट भएपनि पठन पाठन हुँदा बालबालिकालाई केही राहत त मिलेको छ । तर कक्षा शिक्षण जस्तो प्रभावकारी नभएको बालबालिकाहरु बताउछन् ।
बन्दाबन्दीले शैक्षिक गतिविधि शुन्य छ । शुन्य हुँदा अभिभावकलाई पहिलो चिन्ता उनीहरुका सन्ततीको शिक्षा हो । सरकारले ठोस योजना पनि ल्याउन सकेको छैन । जसका कारण सन्ततीको शिक्षाको विषयमा चिन्तित रहेका अभिभावकलाई केही सन्तोष हुने आधार बनाएको छ अनलाइन शिक्षाले ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवा महंगो छ । आर्थिक स्तर कमजोर भएकाका लागि महंगो अनलाइनले शिक्षा दिन त कठिन छ । सरकारले शैक्षिक कार्यक्रमको ठोस योजना नल्याउदा बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य अनिश्चित जस्तै बनेको छ । यद्यपी केही विद्यालयले अनलाईनबाटै भएपनि पठनपाठन शुरु गरेका हुन् ।
कक्षाकोठामा पढ्दै र पढाउदै आएका विद्यार्थि र शिक्षकहरुलाई अब अनलाइन प्रविधिको उपयोगितामा उत्साहित गर्न त्यसबारे जानकारि दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरि इन्टरनेटको सहज र सुलभ पँहुच तथा उपयुक्त पाठ्यसामाग्रिको निर्माणले मात्र आगामी दिनमा अनलाइन मार्फत गरिने पठनपाठनलाइ प्रभावकारि बनाउन सकिने देखिन्छ ।
अनलाइन कक्षा कति सार्थक ?
Posted by Mountain Television on Thursday, May 21, 2020